Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » LGBTQ eran-tany + Andro fitsangantsanganana Italiana style
Kolontsaina • Zon'olombelona • Vaovao farany Italia • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Andro maneran-tany LGBTQ + Andro fizahan-tany
Ny 10 aogositra ho avy izao dia Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany LGBTQ +, natsangana tany amin'ireo firenena amerikanina latina ary noraisina tamin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Italia dia tonga tamin'ity fanendrena ity tamin'ny Andro manerantany LGBTQ + Andro fitsangatsanganana voalohany miaraka amin'ireo masoivoho hafa.
Miara-miasa amin'ny Protocol Diversity & Inclusion dia ny ENIT National Tourism Agency, ny AITGL Italiana Gay & Lesbian Association Association, ary ny SPress & Beach Group.
Ilay protokolota vaovao dia mahita an'i Italia, toy ny toerana lehibe iraisampirenena, mandray ny politikan'ny Diversity Management hiomanana amin'ny fanendrena manan-danja ny 2022.
Ity fizotrany ity dia natomboka noho ny fanolorana ny anarana hoe "Fifanarahana IGLTA 2022 tany Milan" Italia. Hoy ny filohan'ny IGLTA Alessio Virgili, “Vidin'ny IGLTA 2022 Ny fivoriambe tany Milano dia hazava tahaka ny fanilo eto Italia. ”
LGBTQ + fizahan-tany any Italia dia miroso amin'ny vanim-potoana vaovao. Ny biraon'ny ENIT manerantany dia mandray anjara amin'ny fikarohana ao amin'ny sehatra miaraka amin'ny fanohanan'ny komity siantifika AITGL, izay andraisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny indostrian'ny fizahantany italiana sy ny andrim-panjakana.
Hoy ny filoha Virgili: “Ny fizahan-tany LGTBQ + dia mitentina 2.7 miliara euro amin'ny tombam-barotra tany Italia. Faly aho fa nahatratra io dingana lehibe io taorian'ny nanolorantsika tena hatry ny ela ny fitomboan'ny tsena ity tamin'ny fanohanan'ny andrim-panjakana sy orinasa maro. "
"Vidin'ny IGLTA Efa niaina fotoana tena tsara ny fifanarahana, hoy i Virgili, "ary ny fiatraikany ara-toekarena aterak'ity fihetseham-po ity dia azo antoka fa hampisondrotra fitomboana bebe kokoa ho an'ny firenentsika, hamokatra 2 tapitrisa dolara amin'ny serivisy fanampiana fotsiny ho an'i Milan mandray ity hetsika ity."
Ny fizahan-tany LGBTQ + dia sehatra mahazaka tena mampivelatra ny fahalianana tena manokana izay mitarika ny sehatry ny fizahantany. Italia dia mirakitra ny 10 isan-jaton'ny mpandehandeha eran-tany LGBTQ + manolotra fahafaha-manao amin'ireo orinasa te-hanovaova sy hampiasa vola amin'ity sehatra manan-danja ity izay mahafaly an'i Italia ho firenena mandray.
Ny fiarovana, izay nanjary zava-dehibe hatrany ho an'ireo mpizahatany LGBTQ +, dia ankalazaina manerantany amin'ity taona ity miaraka amin'ny lohahevitra hoe "Fanandramana azo antoka kokoa ho an'ireo mpandeha LGBTQ +, ho an'ny dia mankany amin'ny fizahantany tafiditra."
"Ny haavon'ny fahombiazana ankehitriny, vokatry ny asa an-taonany maro, dia fandresena ihany koa ary tombony ara-barotra ho an'ireo mpandraharaha Italiana rehetra ao amin'io sehatra io," hoy i Virgili namarana.
Andro maneran-tany LGBTQ + Andro fizahan-tany dia ankalazaina amin'ny 10 Aogositra isan-taona ary misy fombafomba, fanambarana ary hetsika. Ity andro ity koa dia manome voninahitra ireo mpisava lalana amin'ny dia lavitra izay nanamboatra ny làlana ary nahatonga ny dia ho azo antoka kokoa mpizahatany pelaka, lesbiana, bisexual ary trans ary manaiky ireo izay nanao laharam-pahamehana ny fanajana ny fahasamihafana ao anatin'ny orinasany.
Podcast Big Gay avy any Puglia hoy:
11 Aogositra 2021 amin'ny 02:25
Vaovao mahafaly re izany! Raha ny fanadihadiana natao vao haingana momba ny fiarahamonina LGBTQ + any Italia dia i Puglia no toerana itiavan'ny LGBTQ + fahavaratra any Italia. Puglia dia ekena eo amin'ny sehatra iraisampirenena ihany koa ho iray amin'ireo toerana fialantsasatra 5 mahafinaritra indrindra any Eropa ho an'ireo mpandeha LGBTQ +. Izay mahatonga an'i Puglia ho toerana mety indrindra amin'ny 10 Aogositra 2022.